Olee otú Record Online Music na Nyefee na iTunes?
> Resource> iTunes> Olee otú iji Record Online Music na Nyefee na iTunes
"M chọpụtara na a kediegwu song na Myspace ma na-achọ ka ya na-egwuri na m iPod. Ma ebe ọ bụ na ọ bụghị na ahịa ugbu a, m na-apụghị ịzụta ya. Ọ bụ n'ebe ahụ n'ụzọ ọ bụla iji nweta ya ugbu a?" - Peter
"Ebe ọ bụ grooveshark.com na Pandora.com na-redesigned, enweghị m ike ibudata music si abụọ saịtị ọ bụla ọzọ n'ihi na Downloader m na-eji agaghịkwa na-arụ ọrụ" -Emily
Ọ dị mfe ịhụ na-ege ntị music na Internet. Otú ọ dị, mgbe ọ na-abịa offline ụtọ, ọ bụ ike. Ịgbanwe ọnọdụ, ndị ụzọ dị mfe pụrụ ịbụ-azọpụta online music. Na nke a na-esonụ akụkụ, anyị na-aga ikwu banyere otú idekọ online music.
Ka ịdekọọ online video ma nyefee ndị ahụ e dere music ka iTunes, ngwá ọrụ na-mkpa. Iji zọpụta oge na ume, ebe anyị na-aga na-eji onye-nkwụsị ngwá ọrụ, Streaming Audio Recorder. Ọ pụrụ idekọ online music na 1: 1 àgwà, na na na-ese, album aha na cover tagged. Na dị nnọọ ke otu click music nwere ike na-akpaghị aka kpọfere iTunes. Download, wụnye na-agba ọsọ ahụ gụgharia Audio teepu.
Pịa "Record" button na isi interface nke Streaming Audio Recorder. Mgbe ahụ jikọọ na Ịntanetị. Gaa na web, chọta abụ na ị chọrọ ka ịdekọ na-egwu ya. Ọ bụ ya! The gụgharia Audio teepu nwee ike ịgụcha ndekọ na-akpaghị aka n'ihi na ị. N'oge ndekọ usoro, ị kwesịrị ị na-ahụ ngwá ọrụ na mkpado na song n'ụzọ zuru okè na-ese, album ọmụma. Nke ahụ bụ otu onye nke anwansi atụmatụ.
Mgbe ị ọma idekọ music, ị pụrụ ime ka ọtụtụ ndị music site na-eme ya n'ime ringtone maka ekwentị gị, iPhone gụnyere. Pịa họrọ song na pịa ringtone Ndinam icon, kpebizie oge nke ringtone.
2 Nyefee ndị ahụ e dere music ka iTunes
Streaming Audio Recorder-Enyere gị aka nyefee dere music ka iTunes ozugbo. Họrọ songs wee pịa "Tinye ka iTunes" button ka ha atụkwasịkwara gị iTunes.
Nice ngwá ọrụ na mfe usoro, nri? Olileanya na unu nwere ihe fun na-ekpori music na Streaming Audio Recorder.
Olee otú Download Music si Songza